Anoshanda Verizon inopa mwedzi mina yekunyorera mahara kuApple Music | Ndinobva mac
Anoshanda Verizon inopa mwedzi mina yekunyorera mahara kuApple Music
Spotify yagara ichitsoropodzwa zvine mutsindo nekuda kwenzira yayo yekukwezva vashandisi vatsva, fomura iyo pasina mubvunzo yaibvumidza kuti isvike vashandisi mamirioni makumi matanhatu, nepo makwikwi akanangana kwazvo, Apple Music, iri padhuze nemamirioni makumi matatu, 60 kuti ive chaiyo. Asi Spotify handiyo yega sevhisi yekushambadzira inoedza kutora kufarira kwevashandisi vanofarira kumhanyisa mimhanzi, sezvo Apple ichipawo akasiyana zvipo zvekuchengetedza mashoma maeuro pakupera kwegore, kana kunyangwe pakupera kwemwedzi kana uchinyoresa yeApple Music. Kuti urambe uchisimudzira mimhanzi yako yekushambadzira sevhisi, Apple yasvika chibvumirano neVerizon yekupa mubairo vashandisi vayo neApple Music mahara.
Verizon inopa chirongwa chemapoinzi zvinoenderana nemari yakaunganidzwa yekushandisa kwevanoshandisa, chirongwa icho kusvika zvisati zvamboitika chaive chiripo muSpain. Iyi purogiramu yemapoinzi inopa mukana kune Vanokudzwa Nhengo iyo Verizon inoda kupa mubairo vashandisi vanoshandisa zvakanyanya mukambani yako. Pakati pesarudzo dzakasiyana dzaanotipa parizvino, isu tinowana yemahara yemwedzi mina kunyorera kuApple Music kune vese vashandisi vasati vava vatengi kubva kuApple kumhanyisa mimhanzi sevhisi
Nekudaro, avo vatove, vanogona chete kutora mwedzi mumwe wekubhadhara mahara. Asi Verizon inopawo zvidzikiso pamari yepamwedzi yeAmazon Prime Vhidhiyo, HBO Iye zvino uye zvidzikiso kumatikiti emakonzati, Broadway mitambo uye SuperBowl matikiti. Kana imwechete mapoinzi anodiwa asvika, Verizon inongopa vashandisi mazuva makumi matanhatu ekudzikinura mapoinzi yakawanikwa nechero ipi yekusimudzira kwakasiyana kunopihwa nekambani.
Verizon Haisiyo yega kambani yenhare yakashandisa pekunyepedzera kweApple Music kuyedza kuhwina vashandisi vatsva. Pakutanga, Telstra yekuAustralia, T-Mobile kuGerman kana EE yeUnited Kingdom vakaitawo zvipo zvakafanana, mushure mekuwana zvibvumirano zvakasiyana neApple mune izvi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Anoshanda Verizon inopa mwedzi mina yekunyorera mahara kuApple Music
Vamwe vashandi veApple Park vanoisa mafoto uye mavhidhiyo enzvimbo yakavharwa paSnapchat